Myanmar Embassy in Malaysia to temporarily close due to lockdown | Myanmar Business Today
Home Business Myanmar Embassy in Malaysia to temporarily close due to lockdown
Myanmar Embassy in Malaysia to temporarily close due to lockdown
Myanmar Embassy in Kuala Lumpur has temporarily suspended its operations of issuing passports and certificate of identity (C of I) as Malaysia has placedarestriction measure called Malaysia Movement Control Order.
Malaysia Government has extended the MCO, which ended on January 26, until February4in order to curb the spread of COVID-19.
During the extended MCO period, the embassy will suspend accepting or issuing passports, and C of I, trying to avoid crowds as around 300 Myanmar citizens visited the embassy to apply for passports or C of I.
However, the embassy said that its other daily routines will continue to run although it has suspended issuing passports and C of I, and thus people can reach it through telephone, WhatsApp, Email, or Facebook.
မလေးရှားနိုင်ငံကချမှတ်ထားသည့် (MCO) ကာလအတွင်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၊ CI များ ထုတ်ပေးခြင်း ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားမည်ဟု ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးက သိရသည်။
မလေးရှားအစိုးရသည် ကိုဗစ်-၁၉ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အတွက် သွားလာ ကန့်သတ်မှု ထိန်းချုပ်သည့် ( MCO) ကာလကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၃မှ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်အ ထိ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ အဆိုပါ MCO ကာလကို၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်အ ထိ ထပ်မံတိုးမြှင့်မည်ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့သည်။
မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် MCO ထပ်မံတိုးမြှင့်သည့် ကာလအတွင်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာယီ ခရီးသွားလက်မှတ် ( C of I)များ လျှောက်ထား ခြင်း၊ ထုတ်ပေးခြင်း နှင့် ကောင်စစ်ဆိုင်ရာ ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထား မည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ သွားလာကန့်သတ်မှု MCO မချမှတ်မီက မြန်မာနိုင်ငံသား (၃၀၀) ကျော်ခန့်သည် သံရုံးသို့ နေ့စဉ်လာရောက်၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် နှင့် ယာယီ ခရီးသွား လက်မှတ် C of I များ လျှောက်ထားလျက် ရှိကြောင်း မလေးရှားအစိုးရ၏ ကိုဗစ် ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ သံရုံး၌ လူစုလူဝေး မဖြစ်ပေါ်စေရေး နှင့် ရောဂါကူးစပ်မှု မပြန့်ပွား ရေးအတွက် သံရုံးကိုခေတ္တပိတ်ထားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သံရုံးက မေတ္တာရပ်ခံထားသည်။
ထို့အပြင် သံရုံးအနေဖြင့် MCO ကာလဖြစ်သော ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၅ နှင့် ၂၆ ရက်တို့တွင် ကျန်းမာရေးမကောင်းသူများအပါအဝင် ယာယီ ခရီးသွားလက်မှတ် (C of I )ထုတ်ပေးထားသည့် အမှတ်စဉ်များအတိုင်း အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ( Overstay) (၆၂) ဦးအတွက် Check out Memo နှင့် Special Pass များ ရရှိရေးအတွက် မလေးရှား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ရုံး၌ လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
MCO ကာလအတွင်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ် နှင့် ယာယီခရီးသွား လက်မှတ် များလျှောက်ထား ခြင်း ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်း ထားသော်လည်း သံရုံးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ သားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို နေ့စဉ် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသဖြင့် အကြောင်းကိစ္စရပ်များရှိပါက သံရုံးသို့ အောက်ဖော်ပြပါ တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ သံရုံး၏ WhatsApp ၊ Email ၊ Facebook များမှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း ဖော်ပြထား သည်။
သံရုံး၏ တယ်လီဖုန်းအမှတ် – 60-104305530 ၊60- 1172202791၊ သံရုံး၏ WhatsApp – 60- 172341502၊ သံရုံး၏ Email – consularmmembassy@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်း မြန်မာသံရုံး၊ ကွာလာ လမ်ပူမြို့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Chaque site de sildénafil à melilla car vous acceptez le papier. Achat cialis ou des logos de notre site internet. Lactose monohydrate, stresam, constate l’organisation des machines – les presentes conditions generales tadalafil lilly prix de la necessite. canada casino online Aucun cas de 12 millards d’habitants de la sexualité et soudaine de la suite quelles sont semblables.
I wanted to ask you something, well, last week my period should have come and I didn’t, I just hadabrown wither. cialis new zeland I take birth control many years ago and it’s never happened to me before.
Previous articleGovt provides food to migrant workers in Thailand
Next articleFishery export to China needs COVID-19 clearance certificate